Lamesa teny Soamandrakizay :: Tafakatra valo amby efapolo sy roanjato ireo marary noraisina an-tanana • AoRaha
Lamesa teny Soamandrakizay Tafakatra valo amby efapolo sy roanjato ireo marary noraisina an-tanana
Nitombo isa. “Niakatra ho valo amby efapolo sy roanjato ireo marary noraisina an-tanana, teny Soamandrakizay, nandritra ny roa andro nihaonan’ireo mpizaika tamin’ny Papa Fransoa”, hoy ny Pr Rakotoarison Nicole, tompon’andraikitry ny fahasalamana nandritra ny lamesa teny Soamandrakizay, omaly.
Nitombo io tarehimarika io satria manodidina ny roa ambin’ny folo amby zato no fantatra fa tojo tsy fahasalamana hatramin’ny alahady antoandro. Zaza iray volana, izay tsy nahazaka ny vovoka teny an-toerana no kely indrindra tamin’izy ireo, araka ny fanampim-panazavana. Tsy nisy olana anefa ny toe-pahasalamany rehefa noraisin’ireo mpitsabo tao amin’ny sampana vonjy aina teny an-toerana an-tanana izy.
Etsy an-danin’izay, fantatra ihany koa fa nisy ny olona torana ankoatra an’ilay renim-pianakaviana namoy ny ainy tamin’ny sabotsy sy ireo marary an-jatony. Marihina fa niasa mafy ireo mpilatsaka an-tsitrapo noho ny hamaroan’ireo marary tonga nanatrika ny lamesa. “Marobe ireo tsy tonga tamin’ireo mpilatsaka an-tsitrapo tokony hanampy amin’ny fandraisana an-tanana an’ireo marary ka nahabetsaka ny asan’izy ireo”, hoy hatrany io loharanom-baovao io.
Tsy dia naloto kosa ny toerana raha oharina tamin’ireo hetsika nisy famoriam-bahoaka hatramin’izay, araka ny nambaran’ireo mpikarakara. « Efa nanadio ny ekipan’ny Sampandraharaha misahana ny fikojakojana an’Antananarivo (Samva). Tsy nivangongo loatra ny fako. Efa mba mahalala fahadiovana ny ankamaroan’ny olona. Ny toeram-pivoahana ihany no nanahirana », araka ny fanampim-panazavana ihany.
Mbola tsy nahazoana fanazavana ny fitantanana sy fampiasana ny kianja midadasika eny Soamandrakizay taorian’iny fandraisana ny Papa Fransoa iny. Fantatra fa tanin-dry mompera izy io ka izy ireo ihany no mahalala ny tohiny.
Fandaozana an’i Madagasikara :: Afaka hatao veloma amin’ireo lalana mihazo an’Ivato ny Papa Fransoa
Fanadinam-panjakana BEPC :: An’arivony ireo mpiadina tsy tonga teto Antananarivo renivohitra